के काठमाण्डौ उपत्यकामा लकडाउन हुन्छ? के भन्छन् स्वास्थ्य मन्त्री? – PathivaraOnline
Home > समाचार > के काठमाण्डौ उपत्यकामा लकडाउन हुन्छ? के भन्छन् स्वास्थ्य मन्त्री?
काठमाण्डौ । बढ्दो कोभिड संक्रमणको अवस्थालाई लिएर सर्वसाधारणमा लकडाउन हुने हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ । उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले स्मार्ट लकडाउनको नीति अवलम्बन गर्दै सुरक्षित तरिकाले दैनिकीका काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सर्वसाधारणका लागि केही नियम लागू गरिएका छन् । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले सरकार अनावश्यक ‘लकडाउन’ गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । बिहीवार कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रमपछि बोल्दै मन्त्री खतिवडाले यसअघि अरू देशहरूको कुरा सुनेर लकडाउन गरिए पनि अब आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने बताए । उनले यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर गरेको भन्दै अब लकडाउन नै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार नजाने बताए ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष तयारीका साथ काम गरिरहेकोले लकडाउन हुन्छ भनेर आत्तिनु नपर्ने उनले उल्लेख गरे । “सुरुका बेलामा आ तं क बढी भएको हुनाले केही स्थानमा सामान्य लक्षण देख्दा पनि यसको उपचार लकडाउन भनेर गर्‍यौँ । जति जानेको थियो, त्यति गर्‍यौँ । विश्वमा, युरोपेली देशहरूमा लकडाउन भनेको सुन्यौँ, यो नयाँ कुरा भयो, त्यसैअनुसार गर्‍यौँ । हामी पनि आ तं कित भयौँ ।
गर्नुपर्ने बेलामा गरेनौँ, अघि–पछि गर्‍यौँ । त्यसले केही मृत्युदर घटायो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “तर, त्यसले परेको शैक्षिक क्षेत्रको असर, औद्योगिक, राजस्व, सामाजिक क्षेत्रका अनेक कामहरूलाई पुगेको क्षति, नदेखिने यो क्षति मृत्यु भन्दा पनि भयावह ढंगले भयो । त्यसैले अब हामी आत्तिएर, मात्तिएर लकडाउन नै समाधान हो भन्ने पक्षमा छैनौँ । आवश्यकता हेरेर खास ठाउँमा त्यो विचार पुर्‍याएर हामी लकडाउन गर्नेछौँ । सजिलैसँग लकडाउनमा जाँदैनौँ । आवश्यकताअनुसार ठाउँविशेष गर्न सक्छौँ । त्यसैले तत्काल लकडाउनको विषयमा आ तं कित हुनु पर्दैन ।”
उनले थपे, “नागरिकलाई असजिलो पर्दा सरकार तयारीका साथ बसेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू हामीले तयारीका साथ राखेका छौँ ।” मन्त्री खतिवडाले कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टबाट बच्न होसियार रहनुपर्ने भन्दै मास्क र स्यानिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरे । उनले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित बस्न पनि आग्रह गरे ।
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन अस्पतालमा भिड भइरहेको प्रसंगमा मन्त्री खतिवडाले विभिन्न अस्पताललाई खोप केन्द्र बनाइएको र अझै थप गरेर भिड हुन नदिने बताए । मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य केन्द्र जानका लागि सहज बनाउन सरकारले विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाएको उल्लेख गर्दै नजिकको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन आग्रह गरे । कोरोना खोप लगाउन अस्पतालमा भिड भइरहेको प्रसंगमा मन्त्री खतिवडाले विभिन्न अस्पताललाई खोप केन्द्र बनाइएको र अझै थप गरेर भिड हुन नदिने बताए ।
बोर्डरमा नेपाली र भारतीय सुरक्षाकर्मीको रक्षा बन्धन यस्तो!